आज तुलसी रोप्ने दिन, यस्ता छन घरमा तुलसी रोपेपछि ध्यान दिनैपर्ने १० कुराहरु !
काठमाडौं – “आज हरिशयनी एकादशी अर्थात ठूलो एकादशी ।” हिन्दू धर्ममा यस दिनलाई अति विशिष्ठ र महत्वका साथ हेर्ने र लिने गरिन्छ । आजको दिन नै घरघरमा तुलसी रोपेर आम हिन्दूहरुले चतुर्मास व्रतको आरम्भ गर्दै भगवान विष्णुको उपासना गर्ने गर्छन । भनिन्छ आजको दिनदेखि भगवान विष्णु चार महिनाका लागि क्षीर सागर सुत्न जानु हुन्छ । उहाँ चार महिना पछि हरिबोधनी एकादशीको दिन क्षीरसागरबाट उठनु हुने विश्वास गरिन्छ ।
“हिन्दू समाजमा तुलसीको महत्व”
१. “तुलसीको पात कहिले पनि चपाउनु हुँदैन”
२. “शिवलिंगमा तुलसी कहिल्यै पनि चढाउनु हुँदैन”
३. “तुलसीको पात विशेष दिन चुँडनु हुँदैन”
४. “हरेक दिन तुलसीको पूजा गर्नु फलदायी”
५. “घरको वास्तु दोषको समाप्ती”
६. “तुलसी रोपिएको घरमा खराब नजर समेत पर्दैन”
७. “तुलसीले वातावरण पनि पवित्र बनाउछ”
८. “घरमा तुलसीको सुख्खा वृक्ष नराख्नु”
९. “तुलसी आयुर्वेदको सञ्जीवनी बुटीका समान”
१०. “तुलसीको पात सेवन गर्दा हुने फाइदा”
यो पनि भनिन्छ तुलसी भगवान कृष्णको अति प्रिय वस्तु मध्ये एक हो । त्यसैले पनि प्रतिदिनको पूजामा भगवान कृष्णको चरणमा तुलसीको दल या तुलसीको पात अर्पण गर्नु शुभ मानिन्छ । तुलसीको पात अर्पण गर्दा ‘तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नामक मन्त्रोचारण गर्नु पर्ने मान्यता छ हिन्दू धर्म शास्त्रमा रहेकाे छ। स्रोत: न्युज २४ टिभी नेपाल ।